Wariyeyaashii ka tegay Universal Tv iyo Crown house-Sheeko xiiso badan.
12 March 2013 Waagacusub.com-Xeel-dheerayaasha Warbaahinta Soomaalida ayaa ku tilmaamay dhismaha Crown House ee ku yaala Galbeedka London oo ah dhisme ay ku yaalaan xarumaha ku dhowaad 7 Telefishin oo ku hadla Afka Soomaaliga uu noqonayo dhisme ay isugu yimaadeen wariyayaal kala duwan oo badankooda ah kuwii ka shaqaynayay Universal TV ee bariga London oo mar ahaa warbaahin xoogan oo saamayn ku leh guud ahaan Shacabka Soomaaliyeed. Dhismahan ay ku yaalaan TV-yada badan ee Soomaalida waxaa uu leeyahay maqaaxi qurxoon oo inta badan ay ku kulmaan wariyayaasha, waxaase arin soo jiidasho leh noqotay in maqaaxidaasi ay ku kulmaan wariyayaashii kasoo tagay Universal.
Wariye ka howlgala dhismahasi ayaa waxaa uu yiri: waxaa arin lagu farxo ah in wariyayaashii Universal TV ay fursad isku Heleen inkastoo ay ka howlgalaan TV-yo kala duwan.
Wariyayaashaasi Universal ka wada shaqeeyay waxaa kamid ah: Amina Muse - Horncable, Nadaara - Kalsantv, Xasan Cadde - Somali Channel, Cabdixafiid - Horncable, Bishaaro Cali Baando- Somaliland National TV, Maryan Zaylac- Royal TV iyo ilaa 5 Farsamo-yaqaan.
Wariyayaashan waxaa ay isku salaamaan; cidii aan dhiman way kulmi, from Universal to Crown house, xarunta isu keentay wariyayaal muddo is tabay